Madaxweynaha China oo safar ku tagay Kuuriyada Waqooyi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha China oo safar ku tagay Kuuriyada Waqooyi
Madaxweynaha China oo safar ku tagay Kuuriyada Waqooyi
June 20, 2019 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha China Xi Jinping ayaa markii ugu horeysay Safar rasmi ah ku tagay dalka Kuuriyada Waqooyi halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa si weyn usoo dhaweeyey wafdiga balaaran ee ka yimid China oo ah dalka ugu muhiimsan oo ay laleeyihiin xiriirka.
Waa safarkii ugu horeeyey oo muddo 14sano ah uu Madaxweyne reer China ah uu ku tago wadankaasi ay jaarka yihiin.
Labada dowladood ayaa sanadkan u dabaal-degaya sanadguuradii 70aad ee xiriirka diblumaasiyeed ee ka dhaxeeya labada wadan, ciidamada Shiinaha ayaa ka garab dagaalamay kuwa Kuuriyada-Waqooyi xiligii uu socday dagaalkii 1950-53 ee u dhaxeeyey Maraykanka iyo Kuuriyada-Waqooyi.
Booqashada hogaamiyaha China ayaa kusoo beegantay xili ay weli taagan tahay xiisada ka dhaxeysa Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka, waxaana la filayaa in dhawaan Madaxweyne Xi uu kulan la yeesho Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay ka wada qeyb geli doonaan shirka dalalka G20 oo ka dhacaya Japan.
Wadahadaladii u dhaxeeyey Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa burburay kadib markii ay labada dhinac shirkii ay dhawaan ku yeesheen dalka Vietnam ay ku heshiin waayeen sharuudaha ay labada dowladood ay wateen, kuuriyada Waqooyi ayaa dooneysay inay laga qaado marka hore cunaqabateynta halka Maraykanka uu doonayey in marka hore uu dalkaasi burburiyo hubkooda Nukliyeerka.